porn အခမဲ့သွားလိုပါသလား? ဒီကိုဖတ်ပါ။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
porn အခမဲ့သွားရလိုပါသလား? ဒီဖတ်ပါ။
အဘယျသို့တက်စစ်သားများ ?! ဤနေရာတွင်သင်နှင့်အတူတိုက်ပွဲဝင်ခံရဖို့ထိုးယပ်ခတ်! ဤသည်ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဘယ်လို, ငါအောင်မြင်မှု created ဘယ်လိုငါ၏အညစ်ညမ်းအခမဲ့ခရီးလောက်အနည်းငယ်ပျေါလှငျဖြစ်ပါတယ်, နေ့မှာ 50 (ယနေ့) p / မီတာအခမဲ့ရောက်ရှိလာသော။
ဒီတော့ငါငါ့အသက်ကိုအများစုတို့အတွက် porn နှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်လိင်နှင့်အတူမအောင်မြင်ရုန်းကန်ခဲ့သူတစ်ဦး 34 yo အထီးဖြစ်ကြောင်းကိုဟုပယ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မစာအုပ်တွေ, အွန်လိုင်းလိင်စှဲလမျးသူအစီအစဉ်များ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံပေးခြင်း, ဘုရားကျောင်းဝန်ကြီးဌာနကနှင့်အစီအစဉ်များ, အုပ်စုတစ်စုဆုတောင်းပဌနာ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆုတောင်းပဌနာ, တာဝန်ခံမှုအုပ်စုများ acct ကြိုးစားခဲ့သည်။ မိတ်ဖက်, etc
ကိုယ့်မသက်ဆိုင်ငါကြိုးစားခဲ့ရာ၏, အခမဲ့ရဖို့မထင်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာအလွန်အနိုင်ယူပြီးခံစားချက်, အဒါမကြာခဏကြိမ်ငါစိတ္တဇ add / မူးရူး / ရှင်းလင်းမှု / ထပ်၏အသစ်တခုသံသရာ start လိမ့်မယ်။ ငါ abstinence ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်မလွှဲမရှောင်နောက်တဖန် porn ကိုကြည့်ဖို့ရွေးချယ်လိမ့်မယ်။
ဒီတော့ဒီတစ်ခေါက်ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ ကောင်းပြီ, အရေးကြီးသောနှင့်လိုအပ်သောအစီအမံများ။ ကျွန်ုပ်သည် NoFap အသိုင်းအဝိုင်းတွင်လူသစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးစ / စအခက်အခဲကိုခံခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ကရက် ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ အခု ၆၀ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်းဖော်ပြရမယ့်အဓိကအချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ငါ NoFap အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းပဲ။ ငါပုံမှန်ဘလော့ဂ်များတင်ပြီး၊ p / m မှတစ်ဆင့်လူများနှင့်နေ့စဉ်စကားပြောပြီးကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုတာဝန်ခံမှုနှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ရပ်ရွာနှင့်အခြားသူများ၏အကူအညီကိုအားကိုးခြင်းသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မကြာခဏနှင့်တိုင်းတာနိုင်သောတာ ၀ န်ခံမှုတွင်မပါ ၀ င်လိုပါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
ငါပျောက်နေသည့်နောက်ထပ်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ“ အားထုတ်မှု” ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ဘ ၀ ကိုရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကဆန္ဒမရှိခဲ့ဘူး။ ငါအားထုတ်မှုချို့တဲ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သင်သည် ၆၀% ကတိကဝတ်ဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအခမဲ့မသွားနိုင်ပါ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့ငါနေ့စဉ်အချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
ကျွန်မဇာတ်ကောင်အတွက်ကြီးထွားနှင့် porn ကိုကြည့်တော်မမူကြောင်းလူတစ်အမျိုးအစားဖြစ်လာနိုင်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စ (စာဖတ်ခြင်း, စာရေးခြင်း, ဘာဝနာ, စကားပြောကတိသစ္စာပြု) ။
ဒါ့အပြင်ကိုယ့်အားကြီးသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ရှိသည်, တစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်ရေးသားအစီအစဉ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းမရှိဘဲ, သငျသညျ porn အခမဲ့သွားပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ရေရှည်သည်။ ငါသည်ငါ၏အစီအစဉ်၏ 8 ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်:
1 ။ တစ်ဦးကစတင်နေ့စွဲ
၂။ ဘာကြောင့်ကြေငြာချက် - သင် porn အခမဲ့သွားရန်ရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်းရင်း။
3 ။ ) ငါ၏အအားနည်းချက်များ / သွေးဆောင် Awareness- ။
4 ။ ) ငါပြန်သွားကြသည်လျှင် Consequences- Self-သွေးဆောင်ပြစ်ဒဏ်။
5 ။ ) Milestones- မှုပမာဏတစ်နေ့လျှင် 30 / 60 / 90 ရက်ပေါင်း benchmarks ။
6 ။ ) တက်ကြွစွာ commitments- setting ကိုများနှင့်ပန်းတိုင်။
7 ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျန်းမာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသော) ကိုယ်ပိုင် Care- လှုပ်ရှားမှုများ။ Errrryday ငါအဆိုပါအံ့ဖွယ်နံနက်ပိုင်းလေ့ကျင့်။
8 ။ ) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုန်းကန်ဝေမျှသောသူတို့နှငျ့အတူ Community- ပုံမှန်အစည်းအဝေးများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ကွန်နက်ရှင်။
သင့်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်အကြောင်းတစ်ဆင့်ချင်းဆွေးနွေးတင်ပြထားသည့် hella dope podcast တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းစွာကြံစည်ထားသည့်၊ ရေးထားသည့်၊ လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်အသစ်ပြင်ဆင်ထားသောအရာများဖြစ်သည်။